Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada S.Ogadenia ee Dalka Yemen oo isgu timid shirkeedii caadiga ahaa
Jaaliyada S.Ogadenia ee Dalka Yemen oo isgu timid shirkeedii caadiga ahaa
Waxaa shalay oo ya taariikhdu kubeegnay 25/10/2013 isugu timid shirkeedee caadiga ahaa jaaliyadda dalka Yemen ku nool, shirkaas oo ay kasoo qayb galeen Bulshada qaybaheeda kaduwan iyo marti sharaf kale. Shirku wuxuu kadhacay xarunta jaaliyada wuxuuna biloowday 4:oo galabnimo wuxuuna soo xidhmay 6:oo makhribnimo.
Sidii caadada ahayd shirku waxaa lagu furay Aayado Qur’aan ah iyowacdi diinya oo uu soo jeediyay halgame katirsan jaaliyada. Wacdigaas ayaa dhanacyo badan tabanayay aadna ay ugu khushuuceen dhagaystayaashii shirka joogay.
Intaas kadib shirka oo uu daadihinayay G/jaaliyada ayaa ku soo dhaweeyay xidhiidhiyaha jaaaliyada ee Dalka Yemen oo ka hadlay waxyaabo badan oo halganka quseeya oo ku saabsanaa abaabulka, iskuxidhnaanta, ilaalinta xuquuqda xubinka, kahortaga borobagandhada cadawga, iyo in laysaka ilaaliyo erayada cadawgu adeegsado ee ah in qofku isaga oo aan haynin wax cadayna uuna iska eedaynin qof kale oo xubina ama taageere halgana. Wuxuu yidhi; “ Waxaan joognaa maanta] xiligii lahanan lahaa xoriyada inta badan loo soo dagaalamayay.” Wuxuu mudanuhu hadalkiisii ku soo gunaanaday halku-dhigii ururka ee ahaa midnimo mintid iskutashi guul.
Intaas kadib waxaa lagu soo dhaweeyay codbaahiyaha muwaadin reer Ogadenia ah oo ka tirsan jaaliyada JOKA, kana qaybgalay shirwaynihii 19aad ee jaaliyadaha S.Ogadenia ee caalamka oo sanadkan ay marti galisay JOKA, wuxuuna sifiican uga warbixiyay shirwaynihii iyo siduu u qabsoomay, heerka maanta lamarayo iyo xidhiidhka wanaagsan ee jaaliyada JOKA laleedahay wadanka ay joogaan ee South Africa. Waxaa kaluu aad ugu mahadnaqay jaaliyada YEMEN -SANA’A dadaalka ay samaysay iyo meesha ay ka gaadhay dhanka abaabulka iyo horumarka xarunta jaaliyadu dagan tahay oo anay lahayn jaaliyad iyadoo kale ah marka la is barbar dhigo duruufta wadanka lagaga nool yahay iyo heerka ay gaadhay jaaliyadda Yemen.
Waxaan meesha ka madhnayn maaweeladii iyo madadaaladii KOOXDA HORSEED ay ku soo bandhigay madasha. Guntii iyo gabgabdii shirku wuxuu ku dhamaaday jawi farxadle.